Fepetra fampiasana | Key-Components.com
1.Ny fananana ara-tsaina.
Ny serivisy, ny tranokala ary ny fampahalalana rehetra sy / na atiny izay ahitanao, henonao na fanandramana hafa ao amin'ilay tranokala (ny "atiny") dia arovan'i Shina sy ny zon'ny mpamorona, ny marika ary ny lalàna hafa ary tafiditra ao amin'ny Key-Components. com na ny ray aman-dreniny, mpiara-miasa, mpiara-miombon'antoka, mpandray anjara na antoko fahatelo.Key-Components.com dia manome anao fahazoan-dàlana manokana sy tsy azo fehezina, tsy mampiasa fahazoan-dàlana manokana hampiasa ilay tranokala, ny serivisy ary ny votoatiny hanonta, fisintonana ary fitehirizan'ireo ampahany amin'ny ny votoatiny izay nofidianao, dia azonao atao: (1) mampiasa ireo afa-tsy atiny amin'ny atiny manokana na amin'ny fampiasana manokana, tsy mampiasa varotra; (2) tsy mampiasa na mametraka ny votoatiny amin'ny solosaina tambajotra na mamindra, mizara, na mandefa ny votoatiny amin'ny media rehetra; (3) tsy manova na manova ny votoatiny amin'ny fomba rehetra, na mamafa na manova ny fanamarihana na zon'ny mpamorona.Tsy mety, lohateny na fahalianana amin'izay atiny rakitra na fitaovana nafindra. ho anao vokatry ny fahazoan-dàlana.Key-Components.com re manompo an-dàlana feno sy zon'ny fananana ara-tsaina feno ao amin'ny atiny izay azonao alaina avy amin'ilay tranokala, miankina amin'ity fahazoan-dàlana voafetra ity ahafahanao mampiasa manokana ny votoaty arak'izay voalaza eto.Tsy afaka mampiasa na marika na logo miseho manerana ny tranokala ianao. raha tsy misy fanekena an-tsoratra avy amin'ny tompon'ny marika, raha tsy avelan'ny lalàna azo ampiharina.Ianao tsy afaka manao fitaratra, manaratsy, na hametaka ny pejy an-trano na pejy hafa amin'ity tranokala ity amin'ny tranokala an-tranonkala na tranokala hafa. rohy "mankany amin'ilay tranokala, izany hoe, mamorona rohy mankany amin'ity tranokala ity izay manaiky ny pejy an-trano na ampahany hafa amin'ilay tranokala raha tsy nahazoana alàlana an-tsoratra.
2.Fandikana ny ady.
Key-Components.com dia tsy manome alàlana na anaram-boninahitra, amin'ny alàlan'ny vokatra, na momba ny tranokala, ny serivisy na ny votoaty.Key-Components.com dia manambara am-pitenenana avokoa ireo antoka rehetra amin'ny karazan-javatra rehetra, anehoana, voatonona, statutory. na raha tsy izany, tafiditra ao, fa tsy voafetra ho azy, famaritana ho an'ny mpivarotra, fahasalamana ho an'ny tanjona manokana, lohateny ary tsy misy fandikan-dalàna momba ny vokatra, ny tranokala, ny serivisy ary ny votoatiny.Key-Components.com tsy manome antoka ny fiasa ataon'ilay tranokala na ny serivisy dia tsy ho tapaka, tsy misy fotoana, azo antoka na tsy misy hadisoana, na ireo lesoka ao amin'ilay tranokala na ny serivisy hanitsy.Key-Components.com tsy manome antoka ny maha-marina na fanatanterahana ny votoatiny. na hoe misy fanitsiana hita ao amin'ny atiny dia hanitsy. Ny tranokala, ny serivisy sy ny atiny dia omena amin'ny fototra "As is" ary "raha misy".
Ao amin'ny Key-Components.com, ny adiresy IP mpitsidika dia anaovana tsikeraina sy zahana amin'ny alalàn'ny tanjon'ny fanaraha-maso, ary hanatsara ny tranokalanay fotsiny, ary tsy hozaraina ivelan'ny Key-Components.com.
Mandritra ny fitsidihan'ny tranonkala dia mety mangataka aminao izahay hahazo fampahalalana momba ny fifandraisana (adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, laharana fax ary adiresy amin'ny fandefasana / fandefasana)
3.Limitation of Liability.
Raha tsy izany dia tsy maintsy tompon'andraikitra amin'ny mpividy na ny ankolafy fahatelo ny Key-Components.com noho ny fahavoazana tsy mivantana, tsy fahita firy, manokana, vokatr'izany, fanasaziana na fakan-tahaka (anisan'izany tsy misy fetra very tombony, very vola, na fahaverezan'ny tombontsoam-barotra). ivelan'ny na mifandray amin'ny (I) Izay vokatra na serivisy omena na omen'ny Key-Components.com, na ny fampiasana ny tsy fahaizana mampiasa mitovy; (II) Ny fampiasana na ny tsy fahaizana mampiasa ny tranokala, ny serivisy, na ny votoatiny, (III) Ny varotra rehetra natao tamin'ny alàlan'ny fanamorana ny tranonkala; (IV) Izay fitakiana azo avy amin'ny lesoka, famafazana, na tsy fahatomombana hafa eo amin'ny tranokala, ny serivisy ary / na ny atiny; (V) Ny fidirana tsy nahazo alàlana amin'ny na famaritana ny fandefasana na data, (VI) Fanambarana na fitondran'ny antoko fahatelo ao amin'ilay tranokala na serivisy; (VII) Ny zavatra hafa mifandraika amin'ny vokatra, ny toerana, ny serivisy na ny atiny, na dia Key-Components aza. com dia nanoroana hevitra ny mety hisian'izany fahavoazana izany.
Ny adidin'ny Key-Components.com sy ny andraikitra amin'ny tsy fahampiana vokatra dia, amin'ny safidin'ny Key-Components.com, hanoloana ny vokatra maloto toy izany na hamerenany ny mpanjifa ny vola aloa azon'ny mpanjifa, raha tsy izany, tsy tokony hihoatra ny andraikitra ny Key-Components.com. vidin'ny fividianana ny mpividy. Ny fanafody voalaza etsy aloha dia iharan'ny famaritana an-tsoratry ny mpividy momba ny tsy fahampiana sy ny fiverenan'ny vokatra tsy fahita ao anatin'ny enim-polo (60) andro nividy. famafazana), tsy miraharaha na tsy ampoizina na fanovana, na amin'ireo vokatra efa namidy na nanovana nandritra ny fivoriambe, na raha tsy izany dia tsy afaka hosedraina. Raha toa ka tsy afa-po amin'ny tranokala ianao, ny serivisy, ny atiny, na ny fepetra ampiasainao , ny hany vahaolana tokana sy solika manokana dia ny mampijanona ny fampiasana ny tranokala.Mahafantatra ianao, amin'ny alàlan'ny fampiasana an'ity tranokala ity fa mampidi-doza ny fampiasana ny tranokala.